ဝက်ဆိုက်များမှ မျက်စိရှုပ်တဲ့ ကြော်ညာတွေကို ဖျောက်မယ် – DigitalTimes.com.mm
127 Shares 163 Views
၀က်ဆိုက်များမှ မျက်စိရှုပ်တဲ့ ကြော်ညာတွေကို ဖျောက်မယ်
၀က်ဆိုက်များမှာ ကြော်ညာများစွာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် မျက်စိရှုပ်သလို ၀က်ဆိုက်များ ဖွင့်တဲ့ အခါမှာလည်း နှေးကွေးစေပါတယ်။ Web ပေါ်ကကြော်ညာတွေ Banners, Pop-Ups And Video Ads စတာတွေကို Block လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Browser Extension တစ်ခုကတော့ Adblock Plus ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Web Page Loading ကို လည်းလျှင်မြန်စေပါတယ်။ Firefox,Chrome,Opera စတဲ့ Browser တွေ အတွက် Extension (Or) Add-On တွေ ရှိပြီး Android Device အတွက်ပါ Android Application ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြမှာကတော့ သင့်ပီစီမှ ဘရောက်စာမှာ ၀က်ဆိုက်များမှ ကြော်ညာများကို ဖျောက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Adblock Plus ကို Chrome Browser မှာ အင်စတောလုပ်ပြီးရင် Address Bar မှာ Adblock Plus အိုင်ကွန်ကိုတွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ Web Page တွေ ပေါ်က ကြော်ညာ တွေ အားလုံးကို Default အားဖြင့် Block လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာတွေကို Block မလုပ်ဘဲကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုက်ရောက်ရင် အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပြီး “Enable For This Site” ဆိုတဲ့ Check Box မှာ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးပါ။အဲဒါဆိုရင် အဲဒီဆိုက်ရောက်တိုင်း Adblock Plus က အရောင်မှိန်လျှက် Disable ဖြစ်နေပြီး ကြော်ညာတွေကို သင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Firefox အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့Adblock Plus ကို အင်စတောလုပ်ပြီးရင်အောက်ဘက် က Add-On Bar မှာ Adblock Plus အိုင်ကွန်ကို တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ Web Page တွေ ပေါ်က ကြော်ညာ တွေ အားလုံးကို Default အားဖြင့် Block လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာတွေကို Block မလုပ်ဘဲကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုက်ရောက်ရင် အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပြီး “Disable On This Page Only” ကို အမှန်ခြစ်ပေးရမှာပါ။အဲဒါဆိုရင် အဲဒီဆိုက်ရောက်တိုင်း Adblock Plus က အရောင်မှိန်လျှက် Disable ဖြစ်နေပြီး ကြော်ညာတွေကို သင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Gmail မှာ Storage Space နည်းနေပြီလား? ဒီနည်းတွေနဲ့ Email တွေကို ရှင်းပါ
Sony Xperia XA2 နဲ့ XA2 Ultra မှာ ဘာတွေအသစ်ဖြစ်လာသလဲ??